Xiaomi (သို့) MI အကြောင်း သိကောင်းစရာ ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
Friday, January 20, 2017 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် 1 comment
MI အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Mi ကို ဝယ်တော့မှာလား ? ဝယ်လာလို့ စသုံးဖြစ်ပြီလား ? ဝယ်မယ့်သူကိုပြန်ရှင်းပြဖို့လား ?
- ဖုန်းမှာ အဓိက Model နှစ်မျိုးက Mi နဲ့ Redmi ပါ။ Mi ကတော့ Spec မြင့်သလို ဈေးမြင့်ပါတယ်။ Redmi ကတော့ Spec မြင့်ပေမယ့် ဈေးသက်သာ အောင်ဖန်တီးထားပါတယ်။ အဲသည့် နှစ်မျိုးစီမှာ သာမာန်ထက် Screen Size ကြီးတဲ့ Note Serie တစ်မျိုးစီ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် Mi Note နဲ့ Redmi Note ဆိုပြီးထပ် ရှိပါတယ်။ Mi , Mi Note, Redmi, Redmi Note ဆိုတဲ့ Model တွေပါ။ Mi Max နဲ့ Mi Mix ကိုတော့ သီးခြား အမျိုးအစားထဲ ထည့်ရပါလိမ့်မယ်။
ဖြေရှင်းရန် - Setting >> Additional Setting >> Privacy >> Unknown Sources ကိုအမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ...
ဖြေရှင်းရန် - Setting >> About Phone >> MIUI Version ကို ခုနှစ်ချက်ဆက်တိုက်နှိပ်ပေးပါ..
ဖြေရှင်းရန် - Download Application ကိုရှာပါ အပေါ်ဘက်ထောင့်ရှိ အစက်လေးသုံးစက်မှ တစ်ဆင့် Setting ကိုဝင်၍ Download Size Limit ကို Unlimited ထားပေးပါ...
ဖြေရှင်းရန် - Setting >> Installed App >> Messenger >> Permission Manager >> အောက်ဆုံးက Display Popup Window ကိုအမှားလေးဖြုတ်လိုက်ပါ...
ဖြေရှင်းရန် - Security Application ကိုရှာပါ Data Usage >> Restrict Data Usage >> Zapya ကို Data ရော WLAN မှာပါ အမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ...
ဖြေရှင်းရန် - (၁) Setting >> Sound and Vibration >> Phone Ringtone>> အပေါင်းကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ဖိုင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ...
- Screen ကိုလက်နှစ်ချောင်းနဲ့ စုဆွဲလိုက်ရင် Home Screen ရဲ့ Menu ကိုရောက်သွားပြီး လက်သုံးချောင်းနဲ့ စုဆွဲလိုက်ရင်တော့ Home Screen Preview ကိုရောက်သွားမှာပါ...
- Second Space ဆိုတာက ဖုန်းတစ်လုံးကိုပဲ ၂ လုံးပုံစံ ခွဲထားတာပါ။ သီးခြားကန့်သတ်မှုတွေလုပ်လို့ရသလို Password ခံထားလို့လည်းရပါတယ်။ မလိုချင်တော့ရင် Second Space ကိုပြန်ဖျက်နိုင်ပါတယ်...
- Dual app ဆိုတာက App တစ်ခုကို ၂ ခုဖြစ်အောင်ပွားသုံးတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ပါ။ SIM နှစ်ကတ်သုံးထားလို့ VIber ၂ ခုဖွင့်ချင်တာ Messenger နှစ်ခုသုံးချင်တာ Facebook အကောင့် ၂ ခုသုံးချင်တာ တွေအတွက် လည်းအဆင်ပြေသွားစေမယ့် လုပ်ဆောင်ချက်ပါ...
Credit: ဦိးလေး ချစ်
(MIUI Myanmar Fans)
Posted in: Android နှင့် မြန်မာ Font, Xiaomi, Xiaomi Firmware, Xiaomi Root
10 March 2017 at 01:32 Reply